ထူးခြားဆန်းပြား အသံထွက်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ထူးခြားဆန်းပြား အသံထွက်များ
Posted by မွသဲ ( 17082011 ) on Jul 2, 2012 in Creative Writing | 38 comments
အခုတလော နားထဲမှာ အဆင်မပြေတဲ့ အသံလေးတွေကြားနေရတာနဲ့ ဒီစာလေးကိုရေးဖြစ်တာပါ။
အဲဒါကတော့ အင်္ဂလိပ်စာအသံထွက်ပါပဲ။ ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ ကြည့်အများဆုံး Channel တွေထဲက တခုဖြစ်တဲ့ Family Entertainment ရဲ့ Movie5အစီအစဉ် ကြော်ငြာသူ တွေရဲ့ အသံထွက်ပါ။ ဟိုတလောက ကျွန်မလဲ TV ထိုင်ကြည့်နေတုန်း သူတို့ Movie5ရဲ့ အစီအစဉ်တွေကိုကြော်ငြာပါတယ်။ ကောင်လေး တယောက် အသံနဲ့ပေါ့။ For Series တွေရော5Series တွေရောပေါ့။ အဲဒီမှာ For Comedy အစီအစဉ်လဲရောက်ရော သူကအသံထွက်လိုက်တာ က ဖော်ကမ်းဒီ အတွက် တဲ့။ ဟင်ဘယ်လိုကြီးပါလိမ့်ပေါ့။ ကျွန်မစဉ်းစားလိုက်တော့မှ သူက သူ့ဟာသူ စဉ်းစားပြီးအသံထွက်ထားပုံရတယ်။ Come ကမ်း dy ဒီ = Comedy ကမ်းဒီ ဆိုပြီး။ ( အခုတော့လဲ ပြောလိုက်လို့ထင်တယ်။ ပြင်သွားပါပြီ ) ကျွန်မလဲမသေချာတာနဲ့နောက်နေ့တွေလဲနားထောင်တော့ ဖော်ကမ်းဒီ ပဲ။ အဲဒါကတယောက်။
နောက်တယောက်ကလဲ အဲဒီ5Movie ကပဲ။ ဒီတခါမိန်းကလေး။ L’Oreal အလှကုန်ကြော်ငြာတာ။ Promotion အတွက်။ သူက အဲဒီ L’Oreal ကို ဘယ်လိုအသံ ထွက်လဲဆိုတော့ လိုရီးယဲလ် တဲ့။ ပထမကောင်လေးလိုပဲ။ Lo လို real ရီးယဲလ် = L’Oreal လိုရီးယဲလ် လို့ထွက်တာ။ ကျွန်မတော်တော်စိတ်ပျက်သွားတယ်။
ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်ကဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပြာဂလောက်ပြာလချောင် ကာတွန်းထဲကလိုဖြစ်နေပြီ။ ကိုထူးဆန်း ( ရွာသားမဟုတ်ပါ ) ကလမ်းလျှောက်လာတာကို အိမ်တအိမ်က ကလေးတယောက်ကစာအော်ကျက်နေတာ။ Go ဂိုး At အက် Goat ဂိုးအက် ဆိုပြီး။ အခုအဲလိုဖြစ်နေပြီ။ နောက်ကျွန်မပထမနှစ်တုန်းကလဲကြုံဖူးတယ်။ ကျွန်မနေ တဲ့အဆောင်က အဆောင်ရှင်မိသားစုနဲ့တွဲနေရတာ။ တနေ့ကျွန်မအပြင်ကပြန်လာတော့ သူ့ကလေး တစ်တန်း ကိုစာသင်နေတာ။ Tongue တုန်ဂွီး တဲ့။ Ton တုန် Gue ဂွီး= Tongue တုန်ဂွီး ပေါ့လေ။ ကျွန်မလဲ ပထမတော့ကြောင်သွားတယ်။ ဒီအသံထွက်မကြားဖူးပါဘူးပေါ့လေ။ နောက်တော့မှ အော် ဒီစာလုံးက လျှာကိုပြော တာပဲဆိုပြီး ရီရသေးတယ်။
ဒါလေးကတော့ မြန်မပြည်ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးပြောတဲ့ ဘွဲ့ရပညာမတတ် ( အဲလေ မွှားလို့ ) တနိုင်ငံလုံးဘွဲ့ရအရေအတွက်တိုးတက် ရမယ်ဆိုတဲ့ စီမံကိန်းနဲ့များ ဆိုင်မလားလို့။ ရွာသူားတွေကောဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။ စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဆိုရင် ဘာကြောင့်များပါလိမ့်။
အခုလို ထောက်ပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဘွဲ.ရ ပညာတတ်တွေ များလာစေချင်ပါတယ်။
sterရေ .. ဘွဲ့ ရ ပညာတတ်နဲ့တော့ မဆိုင်ဘူးလို့ထင်တယ် …. ဘွဲ့ရ ပညာတတ်လည်း … ဒီလိုအမှားမျိုးမှားနိုင်တာပါပဲ … ။ ကျွန်မထင်တာတော့ … နေးတစ်ဗ်စပီကာတွေနဲ့ ထိတွေ့မှု အားနည်းလို့ပဲလို့ ထင်ပါတယ် …. ။
မှန်ပါတယ်တုန်တုန်ရေ။ လေ့လာမှု့အားနဲတာကိုပဲပြောရတော့မှာပဲ။ အခုခေတ်ကလေးတွေက လုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပပါလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလေ့လာမှု့တွေမလုပ်ချင်ကြဘူး။ အဲဒါလုပ်ငန်းခွင် မှာ ပေါက် ကရ ဖြစ်တော့တာပဲ။
ရှိသေးတယ် အစ်မရယ်..ဘာတဲ့..အင်ဂျွိုင်းလိုက်ဖ် တဲ့… အဲဒီအသံကို ကြားတိုင်း နားထဲမှာ ကန့်လန့်ကြီးပဲ…
ဘွဲ့ရအရေအတွက်တော့ တိုးပါရဲ့…ပညာတတ်တွေ ပါမလာဘူးလို့ပဲ ဆိုရမလား…Ph.D ဘွဲ့ကိုတောင် ၀ယ်ယူလို့ရတဲ့ ခေတ်ထဲမှာ ဘာမှလည်း မပြောချင်တော့ပါဘူး…
ဟုတ်ပါ့မွန်မွန်ရေ။ အခုခေတ် Ph.D တွေကဘယ်လိုရလဲသိနေတော့ ဒေါက်တာဆိုတိုင်းအထင် အကြီးတော့ဘူး။ ( ဒို့အမေစုမပါ )
ဟီးဟီး …. သူတို့ကလည်း ထွက်ချင်သလိုထွက် … နားထောင်တဲ့ လူတွေကလည်း မကြားတစ်ချက် ကြားတစ်ချက်ဆိုတော့.. ဟုတ်တော့ ဟုတ်နေတာပဲ အစ်မရေ … ။
တချို့ … လူကြီးအဆင့်တွေတောင် အသံထွက်မှန်အောင် မပြောနိုင်တာက ရှိသေးတယ် … ။
ဒါနဲ့များ အမေစုကို မြန်မာကို ဘားမားလို့ သုံးတာ .. အပြစ်ပြောနေသေးတယ် … ရယ်ရတယ် .. ဟိဟိ
သဲကြီးစာကို မောင်ပေ ဖတ်ပြီး ကမ်းကြီး နဲ့ ကမ်းဒီ ဆိုင်မလားလို့ပြုံးနေမိတယ်။ မောင်ပေ လဲ schedule ကို အခုချိန်ထိ အသံထွက် မှားမှားထွက်တုန်း ကလား
UK – /ʃed.jul/
US – /sked.jul/
၂မျိုးလုံးမှန်ပါတယ် ကိုပေရဲ့ ..
သဂျီး ၁၅ ကျပ်ပေးတုန်းလုပ်စားရတာ
စကတ်ဂျူး လို့ ထွက်ရမှာရားဟင်
အာ.. မြန်မာစာနဲ့ English အသံထွက်ကို အတိအကျရေးပြမရလို့
phonetic symbol နဲ့ရေးပါတယ်ဆိုမှ ..
ဂျူး ဆိုပေမယ့်အနောက်က “L” သံနည်းနည်းလေးပါတယ်
တီချာ့ကို ဖုန်းလှမ်းဆက်ပြီး အသံထွက်ပြခိုင်းလေ
အဲဒါတော့ ကိုကမ်းကြီးမေးမှပဲရမှာပေါ့ကိုပေရယ်။ ကမ်းဒီနဲ့အမွှာလားလို့။
ကျုပ်သိတဲ့ ဟာ့ဖ် ပိုးလစ်ရှ် ..အမေဒစ်ကင်န် နိုင်ငံသားကတော့
data ကို ဒါ့ထှာ ..
tiny ကို ထီးနီး လို့ ထွက်တယ်ဗျ…
အံ့ရော ..ဂျပန်မ ယူထားလို့ အသံထွက် ပျက်နေတာဖြစ်မယ်…
အီးးးးးးးးးးဟီးးးးးးးးးးးးးပြောင်းပြန်ပီလားနာမည်။ စာဖတ်လိုက်ဘယ်တူလဲစဉ်းစားလိုက်နဲ့ အခု တ လောဒီအုပ်စုပဟေဠိဖွက်နေကြတယ်။ ဂျပန်နဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတာ တလုံးမှနားမလည် ဘူး။ ဆိုးချက်ကတော့ ကိုရီးယားကမှနဲနဲတော်အုံးမလားလို့။
ကိုယ်တိုင်လဲ အလုပ်ထဲမှာ ဒီပြဿနာ တွေပြည့်နေလို့ မရှင်းတတ်ပါ။
ပိုခက်တာက PIN_YIN သမားတွေနဲ့ တွေ့တော့ ပိုရူးသွားပါတယ်…..
HONG KONG ဟုန်ကုန် ပါတဲ့ခင်ည…
ရုပ်မြင်သံကြား နဲ့ရေဒီယို လွှင့်တဲ့ လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေထားသင့်ပါတယ်။
ရုပ်မြင်သံကြား နဲ့ရေဒီယို လွှင့်တဲ့မှာ စကားပြော စာဖတ်ကြရတဲ့သူတွေက
ကိုယ်လွှင့်လိုက်တဲ့ အစီအစဉ်ကို အသံထွက် စာလုံးပေါင်းတွေစစ်ဖို့ လိုအပ်တယ်။
တစ်ခါတစ်လေမှားတာ ခွင့်လွှတ်လို့ ရပါတယ်။
မကြာခင်က လွှင့်တဲ့ SKYNET ရဲ့ ကချင်အတွက်ပွဲမှာ “ရံပုံငွေ” နဲ့“ရန်ပုံငွေ” စာလုံးပေါင်းကို မှန်အောင်မသုံးနိုင်ခဲ့ဘူး။
“ရံပုံငွေ” နဲ့“ရန်ပုံငွေ” နှစ်မျိုးစလုံး စာတန်းထိုးတယ်။
နောက်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ ရခိုင်အတွက်ပွဲမှာလည်း “ရံပုံငွေ” နဲ့“ရန်ပုံငွေ” စာလုံးပေါင်းကို မှန်အောင်မသုံးနိုင်ခဲ့ဘူး။
“ရံပုံငွေ” နဲ့“ရန်ပုံငွေ” နှစ်မျိုးစလုံး စာတန်းထိုးပြန်တယ်။
ဒါတွေ ပြုပြင်သင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
အရင်ကသတ်ပုံအဖွဲ့ရှိတယ်လေ။ အခုတော့မရှိတော့ဘူးတဲ့။ အဲဒါဆိုးတာပေါ့။
သစ်စ အစ်စ အေ ဂွပ် ထ (This isagood…..)
သစ် စ အစ် စ အေ ဘွတ် ခ
မအောင်မရှိ ငါ့ တပည့် 
ကူးရေး ခိုးချ ဂုဏ်ထူးရ
button ဆိုတဲ့စာလုံး ဘေးကပုံကြည့်ပြီး ပန်ကန်ထဲကပဲကြီးလှော်လို့ဘာသာပြန်တဲ့ ဆရာမတောင်တွေ့ဖူးသေးတယ်။
ကွန်ပျူတာနဲ့အင်တာနက်လောကထဲမှာ ပိုဆိုးမယ်ထင်တယ်..
အသုံးအနှုန်းတွေ ကျော်တို့ တောင် သေချာမသိ..
ဆိုးတာကတော့ပြောမနေပါနဲ့ ကပေါက်ဖော်ရေ။ မြန်းဂလိတွေသုံးပြီး အင်္ဂလိပ်လိုလဲရေးရော ပေါက်ကရတွေဖြစ်ကုန်တော့တာပဲ။
ီDisco – Very ဒစ်စကို ဗေးရီး
Da Ma Ge ဓမကြီး (ဓားမကြီး)
ကန်ပနီ vs. ကုန်ပနီ (ကျော်ဟိန်း လုပ်လိုက်တာနဲ့ ကန်နေကြတာ နောက်ထပ် ကျော်ဟိန်း ကုန် လိုက်တော့ ကန်တွေ အသားသေပြီး ဘာဆက်လုပ်ရမယ် မသိဖြစ်ကုန်ရော)
အမေရိကန် အသံထွက်နဲ့ အင်္ဂလိပ် အသံထွက်တွေကြား ဘာလုပ်ရမှန်း မသိ ဖြစ်နေသူများ
ဇက်လား ဇီ လား
ပီ လား ဖီ လား
တီ လား ထီ လား
တီဗွီ လား တီဗီ လား
ဒဗလူ လား ဒဗလျူ လား
ခေ လား ကေ လား
ကျူ လား ကယူ လား
တချို့မင်းသမီးတွေ ဗမာစကားတောင် ပီအောင်မပြောကြဘူး
“သ”နဲ့ “တ”ကို လွဲအောင်ပြောတယ်
အင်းကလိပ် စာထက် ဗမာစာ ဗမာ စကားကို ပို ပီပီ ရေးတတ် ပြောတတ်စေချင်ပါသည်။
တုန်ဂွီး ဆိုတာကို သဘောအကျဆုံးပါပဲ။
ကျွန်တော့အသိ တစ်ယောက်ရှိတယ် denied ဒီနီး တဲ့။
ကို တောင်ဖက်သားတို့ ဆီက ပြင်မရတဲ့ဒေသသံလေးတွေ
(၃)——–စသဖြင့်. ဗိုလ်လိုဆို အနည်းငယ်ပိုဆိုးတတ်ပါ၏။
ပျဉ်းမနားကလဲ ချမ်းတာကိုရှမ်းတာ။ ချစ်တာကိုရှစ်တာ။ ရှစ်ကိုကျတော့ချစ်တဲ့။ ရှမ်းတာကိုကျ တာ့ ချမ်းတာတဲ့။ မြင်းခြံကသူငယ်ချင်းကကျတော့ ခွန်ကို ခွင်၊ ရေတွင်းကိုရေတွန်း။ သူတို့နဲ့ စကား ပြောရင် ဘာသာကပြန်ရသေးတယ်။
Giordano – လူတိုင်း ဂျော်ဒန်နိးလို့ထွက်တယ်ကျွန်တော်လဲအဲ့လိုပဲထွက်ပါတယ် ဒါပေမဲ့တစ်ကယ့်အသံထွက်အစစ်က ဂျူးဒန်နိ ပါ
Channel -နာမည်ကြီးေ၇မွှေး အားလုံး ချဲနယ် လို့ထွက်တယ်ကျွန်တော်လဲအဲ့လိုပဲထွက်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့တစ်ကယ့်အသံထွက်အစစ်က ရှနဲ ပါ
ုKasperysky – Antivirus လူတိုင်း ကက်စပါစကိုင်းလို့ထွက်တယ်ကျွန်တော်လဲအဲ့လိုပဲထွက်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့တစ်ကယ့်အသံထွက်အစစ်က ကက်ပါစကီး ပါ
Asus ကို အားလုံးက အော့စု တဲ့ဗျား..။